Abdullahi Elmi: Qoyskii guriga laga saaray ee Oslo, waa natiijada siyaasad xumada dowlada ee guryaha. - NorSom News
Home Meninger Meninger/Fikrado Abdullahi Elmi: Qoyskii guriga laga saaray ee Oslo, waa natiijada siyaasad xumada...
Abdullahi Elmi: Qoyskii guriga laga saaray ee Oslo, waa natiijada siyaasad xumada dowlada ee guryaha.
Warbaahinta Norway iyo baraha bulshada, labadii isbuuc ee ugu danbeeyay waxaa aad loogu hadalhayay sheekada qoys soomaali ah oo degmada Bydel Gamle Oslo ee magaalada Oslo ay ka saartay gurigii ay degenaayeen 10-kii sano ee ugu danbeeyay. Go´aanka ka saaritaanka ayaa lagu sababeeyay in aabaha qoyska uu shaqeeyay dakhli(inntekt) 15.000 kr ka badan kan ay dowladu ogoshahay in qofka degan guryaha dowlada uu shaqeyn karo. Halkan kasii akhri sheekada qoyska.
Cabdullahi Cilmi oo ah siyaasi katirsan golaha deegaanka Bergen, ayaa maqaal uu kusoo qoray wargeyska Utrop ku sheegay in ka saaritaanka qoyskaas guriga laga saaray ay tahay natiijada siyaasad xumada dowlada ee guryaha dadweynaha. Cabdulaahi oo Ap katirsan ayaa maqaalkiisa ku sheegay in:
Dhacdadan qoyska soomaaliga guriga looga, waxay kicisay dareenka bulshada Norway, iyadoo aad looga falceliyay qaabka ay u dhacday iyo xiliga ay ku soo aaday. Dhacdadaan ayaa ku soo aaday iyadoo xilligii qaboobaha lagu jiro isla markaasna cudurkii caabuqa karoonaha aw cirka marayo.
Waxaa wax aad looga xumaado noqotay in reerkii argagax lagu riday kadib markii saraakiil ka socda dowlada hoose iyo boolis hubeysay u yimidaan reerkii, xoogna ku muuquniyeen. Ma ahan markii ugu horeysay ee reero guryaha laga xirto ama xoog looga saaro oo horay ayay marar badan u dhacday. Waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay in wax laga bedelo siyaasada guryeynta ee wadanka si loo yareeyo farqiga u dhexeeya bulshada.
Farqiga dadka u dhexeeya wuu sii badanayaa haddii aan hadda siyaasadda wax laga bedelina,waxaa sii xumaanaya fursadaha dadku ku heli karaan gurya ay iyagu leeyihiin. Culeysyadaan waxay si gaar ah u taabanayaan dadka ajaanibta ah
Halkan kasii akhri maqaalka Cabdulaahi ee Utrop: AP-politiker: Vi trenger en bedre sosial boligpolitikk.
Previous articleIlhaan Omar oo rabto in la ciqaabo dhaxalsugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salman
Next articleAkhri: Talaabooyinkan ayaa shaley Oslo lagu soo rogay
Ramadaan aan caadi ahayn: Saameynta feyruska korona iyo soonka.
Xildh. Ubah Adan: Geesiyadii ugu da`da yareyd oo ku dayasho mudan
Kahortagga dhimashada ka dhalata shilalka hafashada (Dabaasha) .
Abdihakim Abdullahi: Maxaa sababa danbiyada ay galaan dhalinyarada Soomaalida ee 10-17 jirada ah.
Abdul Ahmed: Arrimahan ka ogow furitaanka iskuulada caruurta iyo xanoonooyinka.
Abdul Ahmed: Warqad Furan oo Ku Socota Soomaalida Norway.